Senegal: 19 Martsa, Andron’ny Hetsika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Marsa 2011 4:33 GMT
Mitsoka manerana an'i Maghreb sy ny Atsinanana Afovoany ny rivotry ny fikomiana. Maro ireo mpanohitra voatarika hanao hetsi-panoherana any Gabon sy Kamerona.
Ireo mpanohitra ara-politika any Senegal ihany koa dia nirotsaka an-tsehatra amin'ny fanehoana ny tsy fifaliany amin'ny firiorion'ny governemantany. Voafidy ho daty hanaovana ireo fihetsiketsehina ao amin'ny firenena ny 19 Martsa 2011.
Rivotry ny fiovana
Abdoulaye Wade, Filohan'i Senegal. Sary avy amin'ny mpampiasa Flickr World Economic Forum (CC BY-SA 2.0).
Basile ao amin'ny I blog, therefore I am dia nanambara [fr] hetsika iray antsoina hoe: “Leo izahay!” hatao eo amin'ny Kianjan'ny Fahaleovantena ny 19 Martsa”:
Hitsoka mankany Senegal ny rivotry ny fiovana avy tany amin'ny tontolo “Arabo”. Satria tokoa dia nanomboka izany ny tompon'ilay vondrom-pampahalalam-baovao Walfadjri [fr]. Tanatin'ny dinidinika niarahana tamin'ny mpanao gazety natao ny Alakamisy i Sidi Lamine Niasse no niantso ireo Senegaly rehetra handray anjara amin'ny fihetsiketsehina hatao ny 19 Martsa – tsingerintaonan'ny fiovam-pitondrana politika Senegaly – mba hanamelohana ny tsy rariny manjaka eto amin'ny firenena. Hotontosaina eo amin'ny Kianjan'ny Protêt na ny Kianjan'ny Fahaleovantena io sit-in io, izay nomen'i Sidy Lamine Niasse ny anarana manantantara hoe “Kianja Tahrir”.
@basileniane dia nanambara ny fanombohan'ny #19mars (19 Martsa) [fr] tenifototra ao amin'ny Twitter:
Chers blogueurs Sénégalais et de la diaspora c'est parti pour le hashtag #19mars en attendant #kebetu de #sunu2012
Ry mpitoraka bilaogy Senegaly, efa mandeha ny teny fototra #19mars mandra-piandry ny #kebetu (firesahana mivantana) [wo] an'ny #sunu2012 (ours 2012) [w0]
Pikantsary takelaka Facebook "Revolisiona Senegaly".
Nanambara ny fananganana pejy Facebook ihany koa i @basileniane [fr]:
Révolution Sénégalaise : La page facebook qui sonne la révolte: Les Sénégalais sont entrés dans la danse d… http://bit.ly/i4 in Pb.
Revolisiona Senegaly [Fiovana Senegaly]: Ny pejy Facebook izay manely ny feon'ny fikomiana: nanomboka ny dihy ireo Senegaly … http://bit.ly/i4 in Pb.
Mbola 100 [fanavaozana farany ny 15/03/11: 250] ireo mpanaraka izany amin'izao fotoana izao, kanefa maro ireo mpiserasera no nanomboka ny “revolisionany” manokana.
Nisy lahatsoratra iray ao amin'ny vohikala Afrik.com momba ny fanozongozonan'ny fihetsiketsehina “Leo izahay” ny fahefana mitondra [fr], izay mampahalala antsika fa voasambotra ny vondrona mpiangaly ny rap Keur Gui taorian'ny nanamelohan'izy ireo ny firiorion'ny governemanta sy ireo lesoka ao aminy. Ny fiafaran'ilay lahatsoratra:
Taona mialoha ny fifidianana filoham-pirenena, tsy mbola mitsahatra ny firesahana ny momba azy ny hetsika “Leo izahay”.
Talohan'ny mpiangaly ny rap Keur Gui, nisy mpivaro-mandeha tanora iray naneho ny tsy fahafaliany [fr] tamin'ny fahefana mitondra amin'izao fotoana. Ireo hafa tahaka ny mpiserasera mazoto Ansoumana Dione [fr] dia maniry ny hananganana ny komity fampandriampahalemana ny firenena[fr]. Ny hafa, tahaka ny PIT (Party of Independence and Labor) dia mitaky fr] ny fialana tsy misy hatak'andro ny Filoha Abdoulaye Wade.
Na eo aza izany, tsy ny mpanohitra an'i Wade ihany no misy, ohatra, misy lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “Sidy Lamine Niasse no anarako- Eny! Fa inona no idiranao amin'izany?“, mampitandrina i Walid Faye manoloana ny antso fanaovana hetsika ataon'i Niasse:
Tokony hanao ny revolisiona ve isika satria izay no angatahan'i Lamine Niasse, lehibena tv [fahitalavitra], izay ananan'ny fanjakana vola [fr] hatao?
Ireo antony ao ambadiky ny fahatezerana
Ireo anton'ny fahatezerana? Ity lisitra tsy voafetra mirakitra ireo lahatsoratra mamakafaka ireo fitarainan'ny mpanohitra ny fitondrana:
“Sénégal: élections locales à enjeu national sur fond de succession dynastique” (Senegal:Alahady 22 Martsa 2009, fifidianana anatiny amina filokana nasionaly hanomezana ny famindrana ny fanjakana) [fr].
“Karim Wade fait son entrée au gouvernement sénégalais” (Manao ny fidirany ao amin'ny governemanta senegaly i Karim Wade) [fr]. – Famakiana ny dikanteny: voatendry ho Minisi-panjakana miandraikitra ny Fitaterana an-habakabaka sy ny foto-drafitrasa ny zanakalahy ambony fahaizana
“Sénégal: Karim Wade hyperministre” (Senegal: Karim Wade minisitra lehibe) [fr]. Famakiana ny dikanteny: naka ny toeran'ny minisitry ny Angovo ny zanakalahin'ny Filoha Senegaly.
“Sénégal: errements et difficultés d'une succession monarchique au pouvoir” (Senegal: Ireo firiorio sy ny hasarotan'ny famindram-pahefan'ny fanjakan'olotokana) [fr].
“L'irrecevabilité de la candidature” (Ny tsy fanekena ny firotsahan'i Wade ho mpifaninana) [fr].
“Sénégal: le président Wade veut briguer un 3ème mandat présidentiel à l’âge de 86. L'opposition dénoncent une tentative de manipulation de la constitution” (Senegal: Te-hahazo fe-potoana hiasana faha-3 indray ny filoha amin'ny 86 taonany. Manameloka fanadramana hanamboatra ny lalam-panorenana ny mpanohitra) [fr].
“Congres du PDS: Comment Wade veut positionner Karim” (Fivorian'ny PDS: Ny fomba hametrahan'i Wade an'i Karim) [fr]. Famakiana ny dika-teny: Ny Ankolafy Demokratika Senegaly (PDS) dia hanao ny fivoriany ny faran'ny volana Novambra. Amin'ny efa-bolana dia hisy ny fifidianana filoham-pirenena 2012, nokasaina hatao ny Febroary. Nefa maninona ny Filoha Wade no toa mifikitra mafy amin'ity fivoriana ity? Inona ny zavatra hafenin'izany?
“Au Sénégal, Wade inaugure une statue à la mesure de sa mégalo” (Any Senegal, nanokana tsangam-bato mitovy amin'ny halavan'ny tenany i Wade) [fr].